Truck carrying teak trunks flipped over | My Burmese Blog
Truck carrying teak trunks flipped over	On August 28, 2011	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Myanmar news	ဒီနေ့ သန်လျင် ဘက်မှာ ကိုရဲအောင်သူ၊ ဖြိုးဟိန်းကျော်၊ နန်းညီ နောက် ဖြိုးဟိန်းကျော် သူငယ်ချင်း နဲ့ အားလုံး အတူတူ ဓာတ်ပုံရိုက် ထွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြန်မှာတော့ ရှု့ခင်းသာ အရှေ့က ကွေ့မှာ သစ်လုံးတင်ကားကြီး မှောက်နေတာ တွေ့တာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘေးနားက ကားသမား လို့ယူဆရသူနဲ့ သူ့ စပါယ်ယာကို မေးကြည့်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နာရီဝက်လောက်က မှောက်တာလို့ သိရတယ်။ ဆိုတော့ နေ့လည် ၁ နာရီ ခွဲလောက်က ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သစ်တွေတင်ထားပါတယ် ကံကောင်းချင်တော့ မှောက်သွားပေမယ့် သံကြိုးတွေ မပြတ်တဲ့ အတွက် အခြားသူတွေလဲ ထူးထူးခြားခြား ထိခိုက်မိတာ မရှိပါဘူး။ အမှန်တော့ ဒီနေရာက လမ်းက ခဲတွေ ချိုင့်တွေကြောင့်ရယ်နောက် လမ်း အကွေ့ကြီးလဲ ဖြစ်တာကြောင့် မကြာမကြာ မှောက်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေရာကတော့ အဲဒီ ဒေါပုံ မဟာဗန္ဓုလတံတား အဆင်းမှာ တန်းကွေ့ရတဲ့ နေရာ မှောက်တတ်တာ ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ တွေ့တာတွေ ဓာတ်ပုံ ရိုက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ Myanmar news, Photo News, PhotoJournalist, Video News	2 Comments	Annoynimus
During the video display, we saw2trucks carrying logs passed by. How many logs are Myanmar exporting. Looks terrible. Please save the environment from these big thieves before its too late.
Shame on you Tayza (Now disappearing from media due to his big mouth. If you permanently disappear it will be much better)
Like or Dislike:02	Htoo Tay Zar
@ Annoynimus ~ I don’t know which company owns that truck. During our way back home today, I’ve seen4or6cargo ships carrying so many trunks and amazed too. Hoping someone would control those in future.
Well-loved. Like or Dislike:20	LeaveaReply Cancel reply